Ma laga hortagi karaa kansarka? - Calanka Gobolka Baay - WAA KU SOO JEEDI
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB Ma laga hortagi karaa kansarka? - Calanka Gobolka Bay
Waxaa jira fikrad khaldan oo la wadaago oo ah in haddii kansar uusan ku jirin qoyskaaga, in yar oo aad ka nabad gasho cudurka. Maaha sidaas.
Kaliya 5 illaa 10 boqolkiiba kansarka waa reer, ama dhaxal ah, sida laga soo xigtay Machadka Qaranka ee Kansarka (NCI). Taasi waxay si xamaasad leh uga tagaysaa 90 dalool la'aan.
Waxaa la yaab leh in la barto in boqolkiiba 90 ay ka soo jeeddo ficillada ama aadan sameynin. Ururka Kansarka Mareykanka (ACS) wuxuu cadeynayaa in kabadan boqolkiiba 40 kiisaska kansarka inay yihiin kuwa annaga gaar ah.
Dhowr arrimood ayaa kordhiya halista kansarka. Qaar baa gacantaada ku jira. Cudurka wuxuu ku kordhaa da'da. Ku dhawaad ​​boqolkiiba 52 ee kiisaska waxay dhacaan inta udhaxeysa 55 iyo 74. Kansarka ka hooseeya da'da 34 waa wax aan caadi aheyn marka la barbardhigo. Deegaanku waa qodobka kale ee ka baxsan gaaristaada. Ma xakamayn kartid hawada aad neefsato, ama maadin doontid qallal ama shidaal gubanaya. Mana saameyn kartid isirka ama jinsi. Xaalada kiiska - ragga madow ee sababaha xorriyadda ugu badan ee cudurka kansarka qanjirka 'prostate'.
Laakiin waxaa jira dhowr arrimood oo hoos imaadaada. Dhibaatada ayaa ah in dad badani ka warqabaan iyaga. Labadii sanadoodba Machadka Maraykanka ee Cilmi-baarista Kansarka (AICR) ayaa daabacda Sahanka Ogaanshaha Khatarta Kansarka, iyo natiijooyinka ayaa sheegaya sheekada. In kasta oo 93 uu yahay sababta ugu weyn ee kansarka, 40 waxay kordhisaa cudurka kansarka, waxayna yareysaa halista kansarka. Taabadalkeed, dadku waxay ku dhegaan aaminsanaanta in walaaca, hormoonnada ku jira hilibka lo'da iyo cuntooyinka hiddo ahaan loo beddelay yihiin dhibaatooyinka ugu weyn ee ka dambeeya kansarka.
Ilaa hadda waxa ugu weyn ee la xakameyn karo waa tubaakada. Sigaar cabiddu waa sababta ugu weyn ee dhimashada looga hortagi karo, sida laga soo xigtay Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada, iyo xisaabinta dhimashada kudhowaad 1,300 maalin kasta dalkan. Kaliya sigaar cabayaasha ma bixiyaan ciqaabta. In ka badan dhimashada 41,000 sanad walba waxay ka dhalataa qiijinta qiiqa labaad.
Christopher Lathan, MD, MS, MPH, Maamulaha Kuliyadda Machadka Kansarka Kansarka Kansarka-Farber. PHOTO: DANA-FARBER CANCER INSTITUTE
Waxaa la ogyahay in sigaar cabistu ay la xidhiidho kansarrada sambabaha, afka iyo cunaha, laakiin dhab ahaan Dr. Christopher Lathan, oo ku takhasusay kansarka sanbabada ee Machadka Kansarka Kansarka ee Far-Far.
Waxyeelada ay soo gaartay tubaakada maahan wax la yaab leh. Qiiqa Tubaakada waxaa ku jira kiimikooyin waxyeelo u leh 250, ugu yaraan 69 kuwaas oo sababi kara kansar, marka loo eego NCI. Sigaar cabayaasha qaarkood waxay u leexdaan waxay u tixgeliyaan "amaansan" noocyada isticmaalka tubaakada, sida sigaarka, tuubooyinka iyo tubaakada qiiqa, laakiin isbedeladan ma bixiyaan difaac. Isticmaal kasta oo tubaako waxaa lala xiriiriyaa kansar. Ma beddeleyso nooca.
Haddaba muxuu qofku khatar u noqon karaa? Dhammaanteed waxay ku saabsan tahay nikotiinta. Sigaar cabistu waa qabatimo, iyo nikotiin waa mid ka mid ah daroogada ugu adag ee laga gudbi karo, waxayna ku badantahay heroin iyo cocaine. Dhallinyaradu waxay u leexanayaan sigaarka elektaroonigga ah (E-sigaarka) iyagoo raadinaya meel kale oo badbaado leh, laakiin sidoo kale waa wax balwad leh.
Dadka qaar waxay isku dayaan inay yareeyaan halista cudurka, laakiin sida laga soo xigtay NCI, xitaa hal sigaar ayaa sababi kara kansarka la xiriira sigaarka. "Waxa ugu fiican ee aad sameyn kareysaa waa sigaar cabista," ayay tiri Lathan. Waqti ka dib halista ayaa yaraata, laakiin waligeed uma ekaanayso eber. "
Joojinta ma fududa. Waxay qaadan kartaa 10 ama iskudayo dheeri ah, markaa isku day… ka dib isku day mar kale.
MARNA HALKAN AYAAN U SAMEE
Dhowr barnaamij ayaa la heli karaa si ay kuu siiyaan talooyin iyo talo ku saabsan joojinta sigaar cabista:
Khadka Caawinta Sigaarka: 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669)
Machadka Qaranka ee Kansarka Sigaar Joojinta: 1-877-448-7848
Joojinta Bulshada Kansarka Mareykanka ee Nolosha: 1-800-227-2345
Cayilku waa qodobka labaad ee khatarta ugu weyn ee kansarka, marka loo eego AICR, waxayna u dhigantaa qiyaastii boqolkiiba 7 dhammaan dhimashada kansarka. Taasi waxay si gaar ah qaylo-dhaan u tahay tan iyo sababta oo ah cayilka xad dhaafka ah ee dalkan uu hadda u dhigmo boqolkiiba 40 boqolkiiba waana ku badan yahay madow iyo Hisbaanik.
Waxay la xiriirtaa dheelitir dheeri ah oo aan qaan-gaar aheyn, laakiin dhab ahaan, waxay ku xiran tahay 13 kansar oo kaladuwan. Taasi waa sababta oo ah baruurta ayaa soo saarta estrogen, taas oo marka ay siyaado tahay ay kordhin karto halista uterine, kansarka naasaha iyo ugxansidaha, gaar ahaan dumarka dhalmada kadib.
Cadaadiska heerka hoose ee daba-dheeraada ayaa noqon kara mid kale. Tusaale ahaan, caabuqyada dhiigga caloosha ku dhaca ee caanka ah, oo ku badan dadka cayilan, ayaa ugu dambeyn sababi kara kansar.
Waa caado caadi ah in khamri lagu laabo shaqo ka dib shaqada ama galaas khamri ah. Laakiin immisa ayaad haysataa? Machadka Qaranka ee Ku-Xadgudubka Khamriga iyo Khamriga wuxuu leeyahay jawaab: hal cabitaan maalin, laba ragga. Waxa ka dhigay cabitaan? NIAAA waxay leedahay jawaab arintaas: 12 wiqiyadood oo biir ah; Wiqiyadi xNUMX ah oo khamri ah; iyo wiqadaha '5 ounces', ama durdur cabbitaan 1.5-proof khamri, sida scotch.
Si kastaba ha noqotee, fuud biir ah ayaa qaban karta wiqishadda 44, iyo galaas khamri ah oo ah 22 ounces. Markaas koobkii khamriga ama xajiin biir ah wuxuu isu beddelaa afar jeer. Aalkolada xad-dhaafka ah, gaar ahaan marka lagu daro sigaar cabista, waxay badanaa la xiriirtaa kansarka madaxa iyo luqunta iyo hunguriga, laakiin waxay sidoo kale saameyn kartaa beerka, naaska iyo xiidanka.
Aalkoladu waxay u dhaqmi kartaa sidii xanaaq oo waxay u horseedi kartaa waxyeelo unugga kaas oo sababi kara kansar. Maskaxda ku hay in ay tahay qaddarka aalkolada - ma aha nooca cabbitaanka aalkolada - in la kordhiyo.
Cuntada iyo firfircoonaanta
Qiyaasta Qiyaasta 5 boqolkiiba sababaha looga hortagi karo ee kansarka waxaa loo aaneeyey jimicsi la'aan iyo cunno xumo, sida laga soo xigtay ACS. Mantra cusub ayaa ka sii dhaqaaqaya ... fadhiiso waxyar. Soddon daqiiqo ilaa dhaqdhaqaaq jir ahaaneed oo dhexdhexaad ah, sida socodka, ayaa ku filan. Waxay isku daraan taas oo leh qorshe cunitaan caafimaad leh oo ah miraha, khudradda, miraha dhan, khudradda iyo miraha. Xeel-dheerayaasha nafaqada waxay kugula talinayaan yareynta cunista hilibka kaliya hal wiqiyadood oo ah 12 wiigii, iyo hilibka la farsameeyay, sida hilib doofaar iyo hilib doofaar, waa in si dhif ah loo cunaa, haddiiba. Labaduba waa kansarka laxiriira.
Cudur faafa: Papillomavirus, ama HPV, waa fayraska ugu badan ee galmada lagu kala qaado. HPV wuu sii jirayaa, wuxuu sababi karaa kansarka minka, siilka, guska, cunaha iyo dabada. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in la tallaalay labo ama saddex qiyaasood oo loo sameeyay si looga hortago infekshannada badankood. Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ayaa dhowaan ansixiyay Gardasil 9 dheddigga iyo labka u dhexeeya da'da sagaal iyo 45.
Kansarka maqaarka: In kasta oo kansarka maqaarku aanu ku badnayn dadka midabka leh, haddana cilmi-baaris ayaa muujisay in heerka badbaadada ee melanoma, oo ah nooca ugu badan ee kansarka maqaarku, uu ku hooseeyo dadka madow. Dadka oo dhan iyadoon loo eegayn qaabka maqaarku waa inay ahaadaan taxaddar ka soo ifbaxa shucaaca UV oo isticmaal muraayadaha qorraxda, iska ilaali qoraxda markay ugu xoog badan tahay oo gasho dhar ilaalin ah iyo muraayadaha qorraxda markay tahay bannaanka. Waad ka hubin kartaa jirrooyinka aan caadiga ahayn ama isbeddelada maqaarkaaga.
Baadhitaanada: Baadhitaanada ayaa lagu ogaan karaa kansarka marxaladaha hore ee baaritaanka kansarka mindhicirka guuleysta iyo kansarka mindhicirka badanaa wuxuu heli karaa isbedelo pre-kansar ah unugyada kahor inta aysan helin fursada ay ugu gudbaan kansarka.
Xeeladan oo dhan waxay ku shaqeeyaan isku-xirnaan si ay kaaga caawiyaan inaad ka ilaaliso kansarka. Hadaad hal uun xallin karto, waxaad ku socotaa wadada saxda ah. Kadib hal tallaabo u qaad hal mar. "Ka hortagga ayaa yareynaya khatarta," ayay tiri Lathan.
Kansarada ku xiran ALCOHOL
Xiidanka iyo malawadka
Larynx (Sanduuqa Codka)
Kansarada ku xiran SANO
Cudurka loo yaqaan 'myeloid leukemia' daran
Dareenka afka iyo cunaha
Kansarada ku xiran OBESITY
Naasaha (dumarka uurka leh kadib)
Noocyo iskahorimaad ah oo kansar ah qanjirka 'prostate'
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.baystatebanner.com/2019/07/17/is-cancer-preventable/